DRIP ကို မိတ်ဆက်ခြင်း - DRIP အသိုင်းအဝိုင်း - တစ်ရက်လျှင် 1%၊ တစ်နှစ်လျှင် 365% ရရှိသည်
တက်လိုက်ပါ။ 8% DRIP ငွေသားပြန်အမ်းခြင်းနှင့် ဆုလာဘ်များ သင်၏ DRIP အပ်ငွေပေါ်တွင်
DRIP crypto coin ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလမ်းညွှန်။
$377,834.34 ကို $10,000 မှ 1 နှစ်တွင် ရယူပါ DRIP အသိုင်းအဝိုင်း? လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါသလား။ ဖြစ်ပါ တယ်။ DRIP အသိုင်းအဝိုင်း လိမ်လည်မှုလား။ အဲဒါက လူအများစုက ထင်ကြပေမယ့် အဓိကက တစ်ရက်ကို 1% ပေးရတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရှာဖို့ဖြစ်ပြီး အဖြေကတော့ DRIP မှာ ရှိနေပါတယ်။ သမားရိုးကျအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်၊ 1000% အမြတ်ငွေသည် ပုံမှန် သို့မဟုတ် ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော cryptocurrency ကမ္ဘာတွင် DRIP နှင့် မဖြစ်နိုင်လောက်ပေ။ bitcoin ကိုစဉ်းစားပြီး ငါဆိုလိုတာကို မင်းနားလည်မယ်ထင်တယ်။
လုံးဝမပယ်ချမီ အောက်တွင် ဖတ်ရှုရန် မိနစ်အနည်းငယ် အချိန်ယူ၍ ဆုံးရှုံးသွားသော အခွင့်အရေးကြီးကို သင့်ကိုယ်သင် လက်လွတ်မခံပါနှင့်။
DRIP ၏အခြေခံအချက်မှာ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် တစ်ရက်လျှင် 1% ပေးချေခြင်း၏အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ထိုပမာဏကိုထုတ်ယူပြီး သင်၏ 1% ၏ DRIP တိုကင်၏ ပြန်လာမှုကို လက်ခံနိုင်သည် သို့မဟုတ် "ရေဓါတ်" လုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ဝင်ငွေများကို ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပြီး 1% ကို ပမာဏအသစ်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် သင်စတင်တွေ့ရှိလာပါသည်။ 3678% APYs (နှစ်ကုန်တွင် သင့်အပ်ငွေအပေါ် အတိုးရနိုင်သည်နှင့်အမျှ သင့်ငွေသည် အချိန်နှင့်အမျှ တိုးလာမည်ကို တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်း) (နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း - ရိုးရှင်းမှုအတွက် အခကြေးငွေများ မပါဝင်ပါ)။
drip network ၏ faucet သည် မြင့်မားသော အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော အပ်ငွေလက်မှတ်နှင့် အလားတူလုပ်ဆောင်သည့် အန္တရာယ်နည်းသော မြင့်မားသောဆုကြေးစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် ပလပ်ဖောင်း၏ လဲလှယ်ခြင်းစာမျက်နှာမှ drip ကိုဝယ်ယူပြီး အခြားအသုံးပြုသူ၏ drip အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်သည်။
faucet ကန်ထရိုက်သို့ drip အပ်နှံခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ drip ၏ 1% နေ့စဥ် ဆက်တိုက်ပြန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (365% အများဆုံးပေးချေမှု)
ကစားသမားများသည် ပုံမှန်အပ်ငွေများ၊ အလှည့်ကျဆုများအပြင် အသင်းအခြေပြု ညွှန်းဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ တသမတ်တည်းနေ့စဉ် % ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးသော အခြားပလပ်ဖောင်းများစွာနှင့်မတူဘဲ၊ faucet ၏စာချုပ်သည် စုတ်ပြတ်သတ်၍မရသည့်အပြင် ဆုချီးမြှင့်ခံရသောအစက်များကို အမြဲပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
DRIP ဆုလာဘ်တွေက ဘယ်ကလာတာလဲ။
Drip ဆုလာဘ်များသည် drip အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးအတွက် 10% အခွန်မှ လာပါသည်။
(မပါဝင်ပါ။ ဝယ်သည်။ ပလပ်ဖောင်း၏လဲလှယ်စာမျက်နှာမှ)
သင်သည် နေရာတိုင်းတွင် အခွန် 10% ကိုရရှိသည်။ သိုက် -10%, အခိုင်အမာ – 10%၊ ရောင်းတယ်။ – 10%၊ လေစက် – 10%၊ လွှဲပြောင်းမှုများ (ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့) — 10%၊ ရေဓါတ် — 5% စသည်ဖြင့်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လူတိုင်း၏ တစ်နေ့ 1% ကိုထုတ်ပေးရန် ဗဟိုရေကန် 1 ခုသို့ ရောက်သွားကြပြီး၊ မက်လုံးမှာ ရောင်းချမည့်အစား ပေါင်းစည်းရန် မက်လုံးဖြစ်သောကြောင့်၊ DRIP တွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်းမှာ ပိုများလာပါသည်။ 5%. လူအများစုသည် Faucet တွင်ရှိနေသရွေ့ ဆိုက်၏သင်္ချာကို သူ့ဘာသာသူပေးချေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ DRIP အတွက် အမြင့်ဆုံးမက်လုံးဖြစ်သည့် DRIP သည် အမြင့်အသစ်သို့တက်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
drip ဆုလာဘ်များပေးဆောင်ရန် လုံလောက်သည့်အခြေ အနေမျိုးရှိပါက၊ ဆုလာဘ်များပေးဆောင်ကြောင်းသေချာစေရန် drip အသစ်ကို ထုတ်ယူပါမည်။ drip network ၏နောက်ကွယ်ရှိ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောဂိမ်းသီအိုရီအရ၊ ဆုပေးရန်အတွက်စနစ်သည် mint အသစ်လိုအပ်မည့်ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ Faucet ထဲသို့ ထည့်ထားသော အစက်များကို မီးလောင်သည့် လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပြီး ရေလှောင်ကန် စာချုပ်မှတစ်ဆင့် ငွေဖြစ်လွယ်သော ရေကန်တွင် အဆက်မပြတ် သော့ခတ်ထားသောကြောင့်၊ DRIP သည် တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ deflationary နေ့စဉ် ROI ပလပ်ဖောင်း။
DRIP ၏ Magical Formula သည် "Hydrate" သို့မဟုတ် Recompounding တွင်ရှိသည်။
ပေးချေမှုသည် DRIP ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်လာဖြင့် ဖြစ်သောကြောင့် သင့်တွင် မည်သည့်စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည် (အပြင် စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုဒဏ်ကို ခံစားရမည်)၊ သို့သော် ရှားပါးမှု၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် HODL အတွက် မက်လုံးများ (“နေပါဦး ချစ်တို့ရေ။ life") DRIP တိုကင်၏စျေးနှုန်းကိုရုတ်သိမ်းပေးမည့် သီလရှိသောသံသရာကိုဖန်တီးရန် တိုကင်နိုမစ်များကိုဖန်တီးပါ။ 91% TVL (စုစုပေါင်းတန်ဖိုးလော့ခ်ချထားသည်) ကိုကြည့်ပါ။ စုစုပေါင်း တိုကင်များ ထောက်ပံ့မှု သန်း၏ 9% သာလျှင် ကုန်သွယ်မှုအတွက်ပင် ရနိုင်သည်။
*tokenomics - စကားလုံးနှစ်လုံးကို တွဲ၍ဖွဲ့စည်းသည်။ တိုကင် နှင့် စီးပွားရေး. ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဂေဟစနစ်အတွင်း cryptocurrencies အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည် Defi (Decentralized Finance) တွင် စမတ်စာချုပ်များမှတစ်ဆင့် passive ၀င်ငွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းကို Binance Smart Chain တွင် ဖန်တီးထားပြီး DRIP Token ကို BNB ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
DRIP ကွန်ရက်၏တရားဝင်အမှတ်အသားမှာ ရှားပါးသော၊ deflationary၊ ဆင်ဆာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ခိုင်မာသော၊ အမှန်တကယ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးကိုဖမ်းယူသည့် Binance Smart blockchain (BSC) တွင် DRIP (BEP-20) ဖြစ်သည်။
DRIP Network သည် Forex_Shark၊ BB နှင့် အဖွဲ့မှ ဖန်တီးထားသော နောက်ဆုံးပရောဂျက်ဖြစ်သည်။
1. Binance.com၊ FTX.com၊ Binance.US၊ Bithumb.com နှင့် Kucoin.com ကဲ့သို့သော Cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် BNB ကို ကမ်းလှမ်းသည်။
၎င်းတို့ထံမှ BNB ကိုဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ် (Metamask၊ WalletConnect သို့မဟုတ် Binance Chain Wallet) တွင် သိမ်းဆည်းပါ။
2. ကိုသွားပါ။ Drip Fountain နှင့် DRIP အတွက် BNB ကို လဲလှယ်ပါ။
2. သင်ပါဝင်ရန် drip ကိုမထည့်မီ ကျွန်ုပ်၏ အပေါင်းအသင်းလိပ်စာကို အသုံးပြုပါ။ FAUCET စာမျက်နှာ
(Drip မဝယ်ခင် Buddy လိပ်စာရှိဖို့ လိုပါတယ်။)
4. သင်သည် DRIP တွင် စနစ်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ 1% နေ့စဥ်လက်ခံရန် အသင့်ပြင်ထားပါ။
အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Drip ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
Drip ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသလား။
အီးမေးလ် [email protected] သို့မဟုတ် အမြန်အကူအညီအတွက် Whatsapp 88279070။